WAA MAXAY SABABTA AY NAAGTA U DALBATO LEEFIDA HOOSE | Gaaloos.com
Home » galmada » WAA MAXAY SABABTA AY NAAGTA U DALBATO LEEFIDA HOOSE
WAA MAXAY SABABTA AY NAAGTA U DALBATO LEEFIDA HOOSE
Saan horay u soo sheegnay culimada way isku khilaafeen leefida ama jaqida alaabta haweenka, laakin culimo badan ayaa fasaxday, marka waxaa iswaydiin mudan meesha la leefayo waa halkee?
hadaba naagta bahalkeeda wuxuu ka kooban yahay kintir iyo faruuryo yaryar iyo kuwa waaweyn, iyo duleelka dad badan waxay u qaateen meesha la leefayo inay tahay duleelka taas sax ma aha,
ogow meesha la leefayo waa faruuraha yaryar iyo kintirka,
meeshaas dhacaan ma laha, waa sida faruuraha caadiga oo kale,
hadaba naagta ma ku raaxaysanaysaa leefida alaabteeda?
sida la ogyahay meesha waxay leedahay xidido daran oo dareen badan leh, marka carabka la saaro kintirka wuu soo taagmaa haddii gabadha aan la gudin, haddiise ay gudan tahay meesha dareen ayay ka dareemaysaa oo culus, naagta malaga yaabaa inay ku biyabaxdo leefida?
haa way dhici kartaa naago badan ayaa jiro oo sidaas ku biyabaxo oo macaan badan ka helo, waxaa lagaa rabaa marka aad leefayso inaad naasaha ka tuujiso adigoo leefaya, waayo waxay isku darsanaysaa labo macaan macaanka naasaha iyo macaanka leefidda, sidoo kale lefida qabka ay tahay waa inaad carabka ku riixdo kintirkeeda, gariir ayay gaaraysaa, sidoo kale faraynta gabadha waa muhim, hablo badan ayaa istiinka faraha ka helo, hablo waxaa jira aad uga helo in laga leefo bahalkooda, way ku waalan yihiin.
Waad ogtahay cambarka marka uu kaco inuu dareen xoog badan yeelanayo oo dhacaan soo deynayo, miyirka ayaa ka tagayo gabdho badan oo raaxada jecel, waxaa kaloo jira shuun inuusan lahayn baa la rabaa siilka, waayo wuu kaa hor istaagayaa leefitaanka macaan, timaha ayaa ku reebayo ama meesha nadiif ma noqonayso, gabadha waa inay shuunkeeda si fiican u soo xiirtaa, ilaa meesha ay ka noqoto sida garoon kubad lagu cayaarayo oo kale, qaabab badan baa jira shaqada leefitaanka loo fuliyo.
Qaabka koowaad: inay gabadha dhabarkeeda ku seexato oo ay lugaha furto.
qaabka labaad: inay gabadha istaagto adigana aad jilbajabsato.
Qaabka sedexaad: inay naagta foorarsato oo adigana aad gadaal ka soo laafto, waayo farjiga marka ay naagta foorarsato gadaal ayuu soo maraa dhamaantiisa isagoo daboolan, faruuraha ayaad ka leefaysaa, haddii naagta ay caato tahay leefowga waa fudud yahay, haddii ay leedahay dabo weyn ama si daran ay u buuran tahay, si fiican uma laafi kartid.
Maxaa la smaeeyaa marka lefitanka dhamaado? markaas waxaa bilaabanayso shaqada culus, ileen naagta si fiican ayay diyaar u noqotay waana kacsatay waxay u baahan tahay in loo galiyo malabyarowga.
Title: WAA MAXAY SABABTA AY NAAGTA U DALBATO LEEFIDA HOOSE